January 2019 - Page 2 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
[ November 14, 2019 ] Waa kuma guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland?	Puntland
[ November 14, 2019 ] Puntland Parliament elects Abdirashid Yousuf Jibril as new speaker	English News
Madaxweyne Farmaajo oo yimid Garoowe si uu uga qeybgalo caleemo-saarka madaxweynaha Puntland
January 26, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Sabti ah yimid magaalada Garoowe si uu uga qeybgalo munaasabada caleemo-saarka madaxweynaha Puntland. Waxaa garoonka diyaaradaha Garoowe ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Puntland, masuuliyiin […]
January 25, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta oo Jimce ah yimid magaalada Garoowe ee caasimada Puntland si ay uga qeybgalaan munaasabada caleemo-saarka madaxweynaha Puntland. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan […]
January 24, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Marti sharaf ka socota Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah timid magaalada Garoowe si ay uga qeybgalaan caleemo-saarka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Masuuliyiinta timid ayaa waxaa kamid ah wasiiro, xildhibaano […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah aas qaran u sameysay taliyihii hore ee ciidamada Daraawiishta Janaraal Cabdullaahi Cali Mire “Carays”, kaasoo ku dhintay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland Arbacadii. Taliyihii hore ayaa […]
January 23, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyihii hore ee ciidamada Daraawiishta Puntland Janaraal Cabdullaahi Cali Mire oo loo yaqaan Carays ayaa maanta oo Arbaco ah ku geeriyooday magaalada Garoowe, ee caasimada Puntland, sida ay xubno katirsan qoyskiisa u xaqiijiyeen […]
January 22, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeybgali doona munaasabada caleemosaarka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahai Deni, sida ay sheegeen ilo-wareedyo. Madaxda maamul goboleedyada, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud, iyo […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado ah baarlamaanka ka codsaday in ay ugu daraan wakhti dheeraad ah si uu u soo dhiso golihiisa cusub ee wasiiradda. “Sida dastuurku uu […]
January 21, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho, 21 Janaayo 2019: Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hay’adaha gargaarka ee waddanka ka shaqeeya maanta waxa ay ku dhawaaqeen Qorshaha ka Falcelinta Baahiyaha Bini’aadamnimada ee 2019. Dowladda iyo Hay’adahu waxa ay hoosta ka xarriiqeen baahida […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta oo Isniin ah doortay xubnaha guddiga joogtada ah ee aqalka baarlamaanka. Nimco Cabdi Caarshe, oo kasoo jeeda gobolka Sool, ahna xubinta keliya ee haween ka ah baarlamaanka Puntland […]
The U.S. military launched an air strike in Somalia on Saturday, killing 52 Islamists who had attacked a Somali military base earlier in the day, it said. The air strike targeted al Shabaab fighters who […]
Baarlamaanka Puntland oo Cabdirashiid Yuusuf Jibriil u doortay guddoomiye cusub
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil u doortay guddoomiye cusub maanta oo Khamiis ah. Saddex musharax oo kala ah Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, Cabdijamaal Cusmaan Maxamed iyo Cali Axmed Dhahar ayaa ka qeybgalay doorashada. [...]
Puntland oo gurmadkii ugu weynaa u dirtay magaalada ay fatahaaduhu ku dhufteen ee Beledweyne
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa gurmad u dirtay magaalada ay fatahaaduhu ku dhufteen ee Beledweyne maanta oo Arbaco ah. 20 gaadiidka xamuulka qaada oo ay saaranyihiin 12,733 kiish oo raashin ah iyo dhar cusub ayaa maanta [...]